Foos Omar FantasticOctober 22, 2020
Dadku way isnacaan mar walba. Waana arrin badanaa dhacda in laba ruux oo xiriir lahaa ay isnacaan sabab kasta haku timaadee. Adigana waad ku qaldantahay inaad u maleyso in xiriirkiina uu ka gaashaaman doono waxaas oo kale inay dhacaan.
Waxay ku dhici kartaa xiriir kasta iyadoon loo eegin intaad labadiinu wada socteen ama xiriir aad wada lahaydeen.
Markuu lammaanahaagu kaa sii fogaanayo ama uu ku naco wuxuu lasoo baxaa calaamado muujinaya inuusan wax jaceyl ah kuu qabin.
Sidaa darteed, haddii aad ogaato in waxyaabo badan oo ka mid ah astaamahan ay khuseeyaan xiriirkaaga, waxaa jiri kara sababo ay tahay inaad u walwashid. Waa kuwan calaamado lagu garto inuu ku nacay:
1. Wuxuu Joojiyaa Kajawaabida Qoraalladaada ama Waqti Dheer ayay Ku qaadataa jawaabta
Mid ka mid ah astaamaha ugu horreeya ee lagu garto in ninka saaxiibkaa ah uu runtii ku nacay waa marka uu joojiyo jawaab celinta qoraalladaada.
Si dhaqsi ah ayaad u arkeysaa dabeecaddan qalloocan sababtoo ah wuxuu si lama filaan ah u billaabi doonaa in waqtigii caadiga ah mid kabadan ay ku qaadato inuu kaaga soo jawaabo farriimaha. Wuxuu la imaan doonaa cudur daaro ku saabsan sababta ay waqti dheeer ugu qaadato inuu kaaga soo jawaabo farriimaha.
Laakiin muddo kadib, wuxuu si fudud u billaabi doonaa inuu caroodo mar kasta oo aad weydiiso sababta ay waqti dheer ugu qaadato inuu qoraallada kaaga soo jawaabo.
Tani waa marka ay tahay inaad ogaato in jacaylka xiriirkiina uu hoos u dhacay.
2. Wuxuu joojiyaa inuu ku dadaalo la-hadalkaaga
Isgaarsiinta ayaa had iyo jeer noqoneysa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee nooc kasta oo xiriir ah.
Hadana hadaad ogaato in ninkaad xiriirka leedihiin uu joojiyay inuu kula hadlo, markaa taasi waa dhibaato dhab ah. Xaqiiqdii, in labada ruux ee isjecel inay wada hadlaan waa arrin muhiim u ah xiriirka.
Balse haddii ay dhib noqoto in lawada hadlo isla markaana uu ninku iska ilaaliyo inuu la hadlo gabadha uu jecelyahay ama uu dhibsado taasi waa tilmaan cad oo muujineysa inuu dhibsaday isla markaana uu nacay.
3. Wuu kaa xanaaqaa
Markaan waxaa meesha ka baxay farxaddii, qosolkii iyo kaftankii uu kula wadaagi jiray. Su’aalaha fudud waxay helaan jawaabo gaagaaban ama qallafsan.
Taasi waa calaamad wanaagsan oo muujinaysa inuusan xiriirka u arkin mid aanan wax rajo dambe ah lahayn wuxuuna doonayaa inuu soo afjaro.